Biinka sanduuqyada - Shiinaha Gormeet caaga
wax taaj oo kale duro waa hab aad u boosaska badan ee soo saara qaybo iyo alaabta. Waa mid ka mid ah hababka ugu doortay qaybaha wax soo saarka, sababtoo ah waxa ay leedahay faa'iidooyin badan, ma aha oo kaliya ayaa la isku duro caag isaha fudud iyo ka badan oo la isku hallayn karo, sidoo kale waa mid aad u hufan. Waxaan u isticmaalaa habka wax taaj oo kale duray in badan oo muuqaalka quruxda badan, biinka raagaya & sanduuqyada, iyadoo awood u leh inay sameeyaan qaab, sax ah size adag ama waxyaabaha caag gundhig. Waxaa jira faa'iidooyin badan ee ch ...
Doorsoon dibadda Options
1. Rainbow ee Colors
2. Custom Plate Logo la doorsoon
3. Ereyada kor
4. Custom Full Plate saabka daboolka
Feature 5. Sargaal
wax taaj oo kale duro waa hab aad u boosaska badan ee soo saara qaybo iyo alaabta. Waa mid ka mid ah hababka ugu doortay qaybaha wax soo saarka, sababtoo ah waxa ay leedahay faa'iidooyin badan, ma aha oo kaliya ayaa la isku duro caag isaha fudud iyo ka badan oo la isku hallayn karo, sidoo kale waa mid aad u hufan.
Waxaan u isticmaalaa habka wax taaj oo kale duray in badan oo muuqaalka quruxda badan, biinka raagaya & sanduuqyada, iyadoo awood u leh inay sameeyaan qaab, sax ah size adag ama waxyaabaha caag gundhig.
Waxaa jira faa'iidooyin badan ee na doorashada soosaarka duray wax taaj oo kale biinka & sanduuqyada:
Features faahfaahsan iyo Joometri Complex
Khibrad leh ee la xirrira iyo midabaynta
Kartida aad u Isticmaal Noocyada caaga Multiple Isla
Qalabaynta in Save Kharashka Warshadaha
Samatabbixi si deg deg ah ay sabab u isticmaalaan wax taaj oo kale duray ay hubisaa in si dhib leh u baahan yihiin wax shuqul ah ka dib markii wax soo saarka.
Qalabka ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn:
Adeegyada ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn:
Ø Warshadaynta caaryada
· Gol Product
· Dhammaystirka hawlaha kaabayaal
· Iibso of subcomponents
· Golaha iyo baakadaha
· Maraakiibta Direct in dhinac saddexaad